I-Condo eneGumbi elinye laBucala kwiNoma ye-Trendy
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguStephanie
Phonononga iNoMa/H Street Neighborhood edlamkileyo kwindawo yokuhlala egcwele ubugcisa. Le condo inegumbi elinye labucala inekhitshi eligcweleyo, ibhedi ekhululekileyo elingana nokumkanikazi, kunye negumbi lokuhlala elitofotofo. Sibekwe kwindawo yeNoMa enefashoni kanye phakathi kweMarike yeManyano kunye neSitrato saseH ngokufikelela ngokulula kwiindawo zokutyela ezimnandi kunye neebha. Ufumana i-vibe enobuhlobo, eyahlukahlukeneyo yobumelwane ngelixa uhlala kumgama wokuhamba weCapitol/izikhumbuzo/iMall.
Silandela zonke iiprothokholi zokucoca ze-Airbnb COVID.
Le condo enegumbi elinye igcwele intle, izolile, kwaye ikhululekile. Ilungiselelwe iindwendwe zika-Airbnb ukuba ziphumle emva kosuku lokukhenketha kwaye ilungele ishishini okanye ulonwabo.
-Igumbi lokulala elibanzi elinebhedi yokumkanikazi (+ isakhelo esilungelelanisiweyo samandla)
- 1.5 yokuhlamba
- 562 square metres
-Iwasha / isomisi kwiyunithi
-Inyuswe smart-screen TV TV
- Ikhitshi eligcweleyo + uMshini weNespresso
- Umatshini wesandi
- Igumbi elikhulu
Igumbi lokuhlambela lineshawa ebanzi kwaye igcwele iitawuli, isepha, ishampoo, kunye ne-conditioner. Kukwakho nendawo yokomisa iinwele ebekwe kwidrowa yokuhlambela. I-ayina kunye nebhodi yoku-ayina zikwindawo yokuwasha/yokomisa.
Ukutshaya akuvumelekanga ngokupheleleyo ngaphakathi kwindlu (kubandakanywa ne-cannabis). Akukho ngxaki ngokutshaya kwiveranda. Ukuba utshaya ngaphakathi kwindlu, unokuhlawuliswa intlawulo eyongezelelweyo ye-100 yeedola.
Sibekwe kwindawo yeNoMa enefashoni kanye phakathi kweMarike yeManyano kunye nesitalato iH. H Street features a free DC Streetcar kwaye izele okumnandi / zokutyela ezizodwa & nemivalo - ezininzi apho iinketho yokutyela ngaphandle (Ndiyavuya ukunika iingcebiso!) Union Market yi hub oyithandayo yasekuhlaleni ukutya neziselo pop-ups phantsi. uphahla olunye (okanye phezu kophahla!), Nendawo enkulu yangaphandle. Ukwangaphakathi komgama wokuhamba ukuya kuMrhwebi uJoe, ukutya okupheleleyo, isigebenga, kunye neHarris Teeter ukuba ukhetha ukupheka.